Gas Mgbasa Ozi? | Martech Zone
Gas Mgbasa Ozi?
Fraịdee, Nọvemba 17, 2006 Fraịde, Ọktọba 24, 2014 Douglas Karr
Speedway bụ ebe m ga-agba mmanụ gas.
Maka ọdụ ụgbọ ala, ekwesịrị m ikweta na ha na-eme obere ‘ụma’ ahụ maka njem a na-apụghị izere ezere gaa ọdụ ụgbọ. Maka otu, ana m ebu kaadị akwụmụgwọ Speedway m echekwara ihe ruru 15,000. Ihere na-eme m ikweta na amaghị m ihe nke ahụ pụtara, karịa oge ọ bụla m na-enweta akwụkwọ ikike na-abaghị uru maka sandwich ma ọ bụ ihe ọ bụla. Ma… ọ na-adị mma oge ọ bụla m hụrụ obere ụgwọ ọrụ m na-aga. (Ndị mgbasa ozi ọ bụla na-ege ntị? Ihe na-arụ ọrụ!)
Ihe ọzọ dị mkpa gbasara Speedway bụ na ụmụ nwanyị nọ ebe ahụ na-agwa ndị ahịa ahụ okwu mgbe niile, na-ehicha ha, na-ejide n'aka na edoghi ahịrị ndị ahụ short na ha na-eme ihe dị jụụ dị ka tinye nutmeg na cinnamon n'akụkụ kọfị. Ma enwere otutu kọfị. Mara na kọfị kọfị coffee Kọfị kọfị enweghị ike ịkụ Starbucks mana ọ na-agbanye bọọ na ọnya na ngwa ngwa nri.
N'ụtụtụ nke ụtụtụ, agbasiri m ike ma lee ma enwere mkpọsa DHL na ọkwa anya na gas gas. Na gas sooks! N'elu ikuku! Biko… hapụ ịdị nsọ nke m gas hoses naanị! Naanị m chọrọ iguzo ebe ahụ ma chee echiche nrụgide dị n'azụ eriri ahụ, ugboro ole a na-enyocha ya, ma ọ bụrụ na ọ ga-apụta, Speedway ga-afụ dị ka ebe dị jụụ nke Mission Impossible. Achọghị m ka m gụọ mgbasa ozi sitere na DHL na ụdị azụmahịa mbufe. Anaghị m eme ya. Biko kwere m. Achọghị m. Ekwere m gị nkwa.
Di na nwunye na-ajụ:
E wezụga onye nbipute, onye ga-enweta ego na nke a?
Kedụ ka ụwa si etinye gas n'ụgbọ ala m na ịchọpụta ịmata onye ụgbọ mmiri kacha mma nwere ike ijikwa ngwaahịa ezumike m?
Kedu ụdị mmadụ ma ọ bụ omume omume m na-adaba mgbe ị na-agbanye gas nke ga-amasị onye na-ere ahịa iji tụfuo mgbasa ozi a n'ihu m?
Ole nzukọ nzukọ ahịa banyere na nke a? Ọ dị mma, ị nwere ike ịgwa m. Agaghị m agwa onye ọ bụla. Ọ bụ na 2006 atụmatụ nzukọ ikpeazụ December, ọ bụghị ya? E kekọtara gị na pepemint mochas. Ama m. Anọ m ebe ahụ.
Anaghị m enweta ya. Nzi ọ B NOT mgbasa ozi. Akwụkwọ akụkọ ihe mere eme jupụtara na ụlọ ọrụ ndị nọrọ ọtụtụ nde na mgbasa ozi Super Bowl. Onye ọ bụla hụrụ ha, ma ọ dịghị onye zụtara ha. Chọta ndị na-ege gị ntị, gwa ha okwu etu ha chọrọ ka agwa ha okwu, ma mesoo ha ihe nke ọma.
Jisie na mgbasa ozi gị DHL! M na-amasị na ngwugwu Ihọd n'akụkụ Thai Gardens (na m hụrụ n'anya Thai Gardens) na County Line Road ebe a na Greenwood. Ọ dị ọnụ karịa onye ọ bụla, mana ọ na-enyere m aka ịchọta igbe dị mma, ngwugwu ziri ezi, na ụzọ ziri ezi iji nweta ya. Ọ dịghị ada m… na edoghi bụ mgbe mkpumkpu karịa onye ọ bụla ọzọ!
Ọ bụrụ na Gas Hosevertising ga-arụ ọrụ, ọ kwesịrị ịbụ Goodyear gafee mgbasa ozi n'okporo ámá ebe ahụ. Happen na-ele anya na taya gị ma ọ dịkarịa ala minit ole na ole mgbe ị na-agbapụta gas, na-eche ma ọ bụrụ na nzọ ụkwụ na-eyi oke ala.
Tags: mgbasa ozigas sooksmgbapụta gasgas mgbapụta adebe mmanu
Nyochaa M! De blọgụ maka Dollar
Nov 17, 2006 na 10:33 AM
Knowmara na ọ dịghị mma iji ekwentị gị nke dị nso na mgbapụta ahụ